विषयगत तयारीः कसरी गर्ने शिक्षकसेवा आयोगको विषयगत प्रश्नको तयारी ?
२१ साउन, काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोगले धेरै लामो समयपछि शिक्षकको प्राबि, निमाबि र माबिको शिक्षक पदको लागि खुला विज्ञापन खुलाएको थियो र अध्यापन अनुमतिपत्र अर्थात शिक्षक लाईसेन्सको पनि अहिले तीनै तहमा विषयगत शिक्षक लाईसेन्सको विज्ञापन खुलाएको छ भने छिट्टै फेरिपनि खुला शिक्षकको विज्ञापन गर्ने तयारीमा आयोग तयारीमा लागेको छ ।
त्यसैले पनि हामीले शिक्षक लाईसेन्सको तयारी गरिरहेकाहरुका लागि मध्यनजर गर्दै उपयागी सामग्री ल्याउने गरेका छौं । आज हामीले शिक्षक लाईसेन्स परीक्षामा विषयगत प्रश्नको तयारी कसरी गर्ने भनेर यो समाग्री लिएर आएका छौं । शिक्षक बन्न योग्य व्यक्तिले शिक्षकको खुला प्रतिस्प्रधा र शिक्षक लाईसेन्समा कसरी सफल हुने त ? त्यसको लागि के के– तयारी गर्नुपर्दछ त त्यसमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।
नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अबको परीक्षामा दुई ओटा पत्रमा विभाजन गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ । पहिलो पत्र र द्वितीय पत्र गरी विभाजन गरिएको छ । पहिलो पत्रको अङ्कभार ६५ कायम गरिएको छ भने दोस्रो पत्रको अङ्कभार ३५ कायम गरिएको छ । पहिलो पत्रले विषयवस्तुको ज्ञान , शिक्षण तौरतरिका र शिक्षण सहजीकरणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बनधी सिपलाई समेटेको छ । जसको अङ्कभार ६५ तोकिएको छ । जसमध्ये ४० अङक (बहुवैकल्पिक) प्रश्न र शिक्षण सिकाइका तौरतरिका (विधि), सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी ज्ञान परीक्षण गर्नका लागि ५ अङ्कका दरले ५ ओटा प्रश्नहरु सोध्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी द्वितीय पत्र अन्तर्गत ३५ अङ्कभार कायम गरिएको छ यो द्वितीयपत्र सवै विषयका लागि समान प्रश्न रहनेछन् ।
विशेष रुपमा परिक्षार्थीले शिक्षक लाईसेन्सको तयारी गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । ६० अङ्कको विषयगत प्रश्नहरुको राम्रोसँग तयारी गर्न सकेको खण्डमा हामीले केही हदसम्म पनि सफल्ता प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछौं । कसरी गर्ने त विषयगत प्रश्नको तयारी ।
विषयगत प्रश्नको तयारी कसरी गर्ने ?
-सर्वप्रथम त परीक्षाको तयारीका लागि शिक्षक सेवा आयोगले तोकेका पाठ्यक्रम ,पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामाग्रीहरु तथा पुराना प्रश्नपत्रहरु नमुना प्रश्नोत्तरहरुको सङ्कलन गरेर अध्ययन गर्नुपर्नेहुन्छ ।
-पुराना प्रश्नपत्रको उत्तर आफैँले लेखेर लेखनसिप कलाको विकास गराउन सकिन्छ ।जसले परीक्षामा लेख्नको लागि सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्दछ ।
-अक्षर सफा शुद्ध र केरमेर नगरिकन लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ । उत्तर लेख्दा छोटो, प्रश्नले मागेको मात्र उत्तर लेख्नुपर्छ । अनावश्यक मात्रामा गफ लेख्नु राम्रो मानिदैन ।
यती कुरामा ध्यान दिन सकेको खण्डमा पनि सफल्ता हात लगाउन सकिन्छ ।